IMF Oo Soo Dhoweysay Qorshaha Deyn Cafinta Soomaaliya – Goobjoog News
Kristalina Georgieva Agaaismaha maamulka IMF ayaa Warsaxaafadeed ay soo saartay kadib markii ay ansixisiyeen Guddiga Fulinta ee IMF ee xirmada maaliyadeed ee Soomaaliya:
“Maanta Guddiga Fulinta Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF) wuxuu meel mariyey qorshe maaliyadeed oo gacan ka geysanaya abaabulidda ilaha looga baahan yahay IMF si ay u qaadato doorkeeda deyn dhaafka Soomaaliya.
Qorshahan wuxuu ku tiirsan yahay dadaal ballaaran oo caalami ah, oo ku saleysan xubinta kaalmooyinka lacageed iyo xaddiga laga helay ilaha gudaha ee IMF Managing
“Tani waxay muujinaysaa muhiimadda In laga caawiyo Soomaaliya talaabo ay u qaado talaabo u qaadayso in laga caawiyo inay ku soo noqoshada hannaankii caadiga ahaa xiriirka caalamiga ah ee dhinaca dhaqaalaha iyo horumar laga sameeyo deyn dhaafka iyada oo loo marayo hal abuurka deyn cafinta wadammada faqriga(HIPC)”.
“Cafinta deymaha Soomaaliya waa mid ka mid ah waxyaabaha horutabinta u leh Hey’adda Lacagta aduunka waxaan Dhiiri galinayaa teegaarada ka imaanaysa xubnaha muhiimka u ah arinkan garoowshahooda in Soomaaliya ay horumar la taban karo ka sameysay dib u habeynta dhaqaalaha si waafaqsan barnaamijka kooxda la socodka hey’adda lacagta aduunka (SMP)”.
“Barta go’aan qaadasha hal abuurka deynta Cafinta wadamada faqriga ah (HIPC) wuu bilaabanayaa qorshihiisa sida ugu dhaqsiyaha badan marka ay xubnaheenu na siiyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah deyn cafinta, waxaan filaynaa in masuuliyiintu sii wadaan dib u habeynta dhaqaalahooda tani waxay caawinaysaa furida ilaha dhaqaalaha si Soomaaliya u gaarto horumar balaaran iyo yareynta Afrika” ayay tiri Agaasimaha maamulka hey’adda lacagta aduunka.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa qoraal uu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka ku soo dhaweeyey Warasaxaafadeedka kasoo baxay Agaasimaha maamulka hey’ada lacagta adduunka, waxaana uu sheegay in Soomaaliya ka go’an tahay in laga cafiyo deymaha lacageed ee lagu leeyahay.
5 Qodob Oo Ay Ku Heshiiyeen Beelihii Ku Dagaallamay Mudug (Akhriso)
Waqtiga Doorashada Madaxweynaha iyo Wakiilada Galmudug oo lagu Dhawaaqay
Beyle oo Kismaayo Tagay